इन्प्रेशन भट्टराई र उपकरणहरूमा ताप उपकरणमा ताप इकाई भित्र एक विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रमा उत्पन्न धाराहरु द्वारा उत्सर्जित हुन्छ। तिनीहरूलाई उत्प्रेरित भनिन्छ। तिनीहरूको कार्यको परिणामको रूपमा, तापमान बढ्छ। धातुहरु को ताप को ताप दुई मुख्य शारीरिक कानूनों मा आधारित छ:
मेटाटिक निकायहरूमा, जब तिनीहरू एक वैकल्पिक क्षेत्रमा राखिएका हुन्छन्, भर्तेन्ट बिजुली क्षेत्रहरू देखा पर्छन्।
सबै कुरा निम्नानुसार हुन्छ। एक चर चुम्बकीय प्रवाह को कार्य को तहत, प्रेरण को विद्युतमोटिव बल (ईएमएफ) बदल्यो। ईएमएफ यस्तो तरिकाले कार्य गर्दछ जुन भव्य धाराहरू शरीरभित्र प्रवाह हुन्छ , जुन जोउल-लेन्जे कानूनसँग पूर्णरूपमा ताप उत्पन्न हुन्छ। साथै, EMF धातु मा एक alternating वर्तमान उत्पन्न गर्दछ। यसले गर्मी को ताप उत्पन्न गर्दछ, जो धातु को तापमान मा बढ्छ।
यो प्रकारको तापनि सरल छ, किनकि यो गैर-सम्पर्क हो। यसले धेरै उच्च तापमान पुग्न अनुमति दिन्छ, जसमा प्रायः आगामी आगामी प्रक्रियामा प्रशोधन गर्न सकिन्छ ।
प्रेरक ताप प्रदान गर्न को लागि, यो एक निश्चित भोल्टेज र विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रहरुमा आवृत्ति बनाउन आवश्यक छ। तपाईं यसलाई एक विशेष उपकरण - सुरुवातमा गर्न सक्नुहुनेछ। यसको शक्ति 50 हर्ट्जमा औद्योगिक सञ्जालबाट आपूर्ति गरिएको छ। तपाईं यस उद्देश्यको लागि व्यक्तिगत शक्ति आपूर्ति कन्वर्टर्सर र जेनेरेटरको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
एक सानो फ्रिक्वेन्सी आचरणको सरल यन्त्र एक सर्पिल (कंडक्टर इन्सुलेट) हो, जुन धातुको ट्यूब भित्र राखिएको वा यसको चोट लगाउन सकिन्छ। धाराहरू पठाउँदा पाइपलाई तातो बनाउँदछ, जुन, बदमामा, वातावरणमा उचाल्छ।
कम आवृत्तिमा समावेश ताप को प्रयोग एकदम दुर्लभ छ। मध्यम र उच्च फ्रिक्वेन्सीमा धातुहरूको अधिक सामान्य प्रसोधन। त्यस्ता उपकरणहरू यस तथ्यले फरक छ कि चुम्बकीय लहर सतहमा हिउँदछ, जहाँ यसको घिमिरे हुन्छ। शरीरले यस लहरको उर्जा गर्मीमा बदल्छ। अधिकतम प्रभाव प्राप्त गर्न, दुवै घटक आकारमा नजिक हुनुपर्छ।
आधुनिक संसारमा समावेश ताप तापनि प्रयोग गरिएको छ। प्रयोगको क्षेत्र:
धातुहरु को पिघलने, गैर संपर्क संपर्क मा उनको सोल्डर;
नयाँ धातु मिश्र धातुहरू प्राप्त गर्दै;
अन्य भागहरु द्वारा क्षतिग्रस्त हुन सक्छ साना भागहरु को निर्माण;
सतहहरूको दृढता (भागहरू सबै भन्दा जटिल कन्फिगरेसन हुन सक्छ);
हीट उपचार (मिसिनहरु को लागी भागहरु को मशीनिंग, कडा सतहहरु);
औषधि (उपकरण र यंत्रहरूको डिफिगरेसन)।
प्रेरणा हीटिंग: सकारात्मक विशेषताहरु
यो विधिमा धेरै फाइदाहरू छन्:
यसको साथमा, तपाईं चाँडो ताप्न र कुनै वर्तमान-लेटर सामग्री पिउन सक्नुहुन्छ।
कुनै पनि वातावरणमा तापनि उत्पादन गर्न अनुमति दिन्छ: एक वैक्यूममा, वातावरण, तरल जसले वर्तमान आचरण गर्दैन।
यस तथ्यको कारणले मात्र प्रवाहकीय सामग्री तापिएको छ, पर्खालहरू, कमजोरीहरू कमजोर हुन्छन्, चिसो रहन्छन्।
धातु विज्ञान को विशेष क्षेत्रहरुमा, अल्ट्रा शुद्ध मिश्र धातुहरु प्राप्त। यो एक मनोरञ्जन प्रक्रिया हो, किनभने धातुहरू निलम्बित अवस्थामा मिश्रित छन्, सुरक्षा ग्यासको खोलमा।
अन्य प्रकारको तुलनामा, प्रेरणाले वातावरण प्रदेश गर्दैन। यदि ग्याँस बर्नरहरूको साथसाथै आर्क ताप तापिरहेको छ भने, शुद्ध "विद्युत" विद्युत चुम्बकीय विकिरणको कारणले यसलाई समाप्ति गर्दछ।
प्रारंभिक उपकरणको सानो आयाम।
कुनै पनि आकारको एक अन्डरर गर्ने सम्भावना, यो स्थानीय तापक्रमको नेतृत्व गर्दैन, तर गर्मीको वितरण पनि योगदान गर्नेछ।
यो अपरिवर्तनीय छ यदि यो सतह को एक निश्चित क्षेत्र को ताप को लागि आवश्यक छ।
इच्छित मोडको लागि यस्तो उपकरण सेट अप गर्न र यसलाई समायोजन गर्न गाह्रो छैन।
यस प्रणालीमा यस्ता कमीहरू छन्:
स्वतन्त्र रूपमा तापनि स्थापित गर्न र समायोजनको ताप (प्रेरणा) र यसको उपकरण निकै गाह्रो छ। यो राम्रो छ कि विशेषज्ञहरु लाई परामर्श गर्न को लागी।
सही रूपमा प्रारम्भकर्ता र कार्यपालिका तुलना गर्नु आवश्यक छ, अन्यथा समावेश ताप तापनि अनुपलब्ध हुनेछ, यसको शक्तिले साना मूल्यहरूमा पुग्न सक्छ।
प्रेरणा उपकरण द्वारा ताप
व्यक्तिगत तापक्रम को व्यवस्था गर्न को लागी प्रेरण ताप को रूप मा यस्तो विकल्प को विचार गर्न को लागी संभव छ। इकाई एक ट्रांसफर्मर जान्छ जस्तै, दुई प्रकारको भित्री भागहरू: प्राथमिक र सेकेन्ड (जुन, बारीमा, छोटो-सर्किट हुन्छ)।
एक साधारण प्रारम्भिक को अपरेशन को सिद्धान्त: भंवर को अंदर गुजरता छ र दोश्रो शरीर को बिजुली को क्षेत्र लाई प्रत्यक्ष दि्छ।
यस्तो बयलर को माध्यम ले पानी को पार गर्न को लागि, दुई नलिकाहरु लाई खिलाया जाता छ: ठंडी एक, जो अंदर आउँछ, र गर्म पानी को दुकान मा, एक दोश्रो शाखा पाइप को लागि। दबाबको कारण, पानी लगातार निरन्तरता गर्छ, जुन सुरुवात तत्वलाई ताप्न सम्भावना समावेश गर्दछ। तहको उपस्थिति बहिष्कार गरिएको छ, किनकि निरन्तर कम्पन प्रारम्भकर्तामा हुन्छ।
रखरखावमा यस्तो एक तत्व सस्ता हुनेछ। मुख्य फाइदा यो उपकरणले चुपचाप सञ्चालन गर्दछ। तपाइँ यसलाई कुनै पनि कोठामा स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ।
आफैलाई उपकरणको निर्माण
ठूलो जटिलताको प्रेरणा तापनि स्थापना हुनेछैन। समेत अनुभव गर्नेहरू पनि, सावधान अध्ययन पछि कार्यसँग सामना हुनेछ। तपाईंले सुरू गर्नु अघि, तपाईंलाई आवश्यक आवश्यक तत्वहरूको साथ भण्डारण गर्न आवश्यक छ:
इन्वर्टर। यो एक वेल्डिंग मिसिनबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ, यो सस्तो छ र उच्च आवृत्ति आवश्यक हुनेछ। तपाई यसलाई आफैं बनाउन सक्नुहुन्छ। तर यो एक समय खपत व्यवसाय हो।
हीटर शरीर (यस प्रयोजनको लागि प्लास्टिक पाइपको एक टुक्रा, यस अवस्थामा पाइपको समावेशीकरण तापनि सबैभन्दा प्रभावकारी हुनेछ)।
सामग्री (सात मिलीमीटर भन्दा अधिक व्यासको साथ एक तार फिट हुनेछ)।
हीटर सञ्जाललाई सुरुवात जडान गर्न उपकरणहरू।
सुरुआत भित्र तार को पकडने को लागि ग्रिड।
इन्सुलेशन कुंड तांबे तारबाट बनाइयो (यसलाई ईमिलेल हुनुपर्छ)।
पम्प (पानीको लागि तलको सुरुवातमा)।
निर्माण उपकरणको लागि नियम आफै
ईन्टरनेट ताप इकाईको लागि सही रूपमा कार्य गर्न, यस्तो उत्पादनको लागि वर्तमान शक्तिसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ (यो कम्तिमा 15 एम्पर हुनुपर्छ, यदि आवश्यक छ भने, यो थप हुन सक्छ)।
तार पाँच सेन्टिमिटर भन्दा बढी टुक्राहरू मा काटिन सकिन्छ। यो उच्च आवृत्ति फिल्डमा कुशल तापनि लागि आवश्यक छ।
शरीर कम्तिमा तयार भएको तारको रूपमा ठूलो हुनुपर्छ, र मोटो पर्खालहरू छन्।
हीटिंग नेटवर्क मा फिक्सिंग को लागि, एक विशेष एडाप्टर संरचना को एक तरफ संग जोडिएको छ।
पाइपको तलमा, तपाईं तार रोक्नदेखि तार रोक्न आवश्यक तार चाहिन्छ।
उत्तरार्द्ध यस्तो मात्रामा आवश्यक छ कि यसले सम्पूर्ण आन्तरिक ठाउँ भर्दछ।
निर्माण बन्द छ, एडेप्टर राखिएको छ।
त्यसपछि एक तार यो ट्यूबबाट निर्माण गरिएको छ। यो गर्न को लागी पहिले नै काटिएको तार संग लिपि गर्नुहोस्। घुमाउनुपर्ने संख्या अवलोकन गरिएको हुनुपर्छ: कम्तिमा 80, अधिकतम अधिकतम90।
ताप प्रणालीमा जडान भएपछि, यन्त्र पानीबाट भरिएको छ। कुंडले काटिएको इन्वर्टरलाई जोडिएको छ।
पानी आपूर्ति पम्प स्थापना गरिएको छ।
तापमान नियामक माउन्ट गरिएको छ।
यसैले, ताप तापनि गणना गणना निम्न मापदण्डहरूमा निर्भर हुनेछ: लम्बाई, व्यास, तापमान र प्रोसेसिंग समय। टायरको अधिष्ठापनमा ध्यान पुर्याउने को लागी, जो आफुको सूचकांक भन्दा धेरै ठूलो हुन सक्छ।
सतहहरु खाना पकाने को बारे मा
घरमा अर्को अनुप्रयोग, तापनि प्रणालीको बाहेक, यो प्रकारको तापले हब प्यानलहरूमा पाइन्छ। यस्तो सतह एक पारंपरिक ट्रांसफर्मर जस्तै देखिन्छ। यसको कुंड प्यानलको सतहमा लुकेको छ, जुन काँच वा सिरेमिक हुन सक्छ। हालको माध्यमबाट यो पास हुन्छ। यो कुंडलको पहिलो भाग हो। तर दोस्रो हो व्यंजनहरू जुन खाना पाउँदछ। बर्तन को तल मा बनावट धाराहरु बनाइयो। तिनीहरू पहिला व्यंजनहरू उचाल्छन्, र त्यसपछि यो उत्पादनहरू।
हीट रिलीज हुनेछ जब प्यानल को सतह व्यंजन राख्छ। यदि यो अनुपस्थित छ भने, कुनै कार्य हुन्छ। प्रेरणा तापने क्षेत्र यस मा राखिएको बर्तन को व्यास संग मेल हुनेछ।
यस्ता प्लेटहरूका लागि विशेष प्लेटहरू चाहिन्छ। प्रायः फोरमग्राफिक धातुहरू एक संलग्न क्षेत्रसँग अन्तरक्रिया गर्न सक्छन्: एल्युमीनियम, स्टेनलेस र एनालिबल स्टील, कास्ट आयरन। त्यस्ता सतहहरूको लागि मात्र उपयुक्त छैन: तांबा, सिरेमिक, काँचकायरहरू र अलौहिक धातुको भाँडा।
स्वाभाविक रूप देखि, प्रेरक कुकर केवल जब एक उपयुक्त डिश स्थापित भएको छ मा स्विच हुनेछ ।
आधुनिक प्लेटहरू एक इलेक्ट्रोनिक नियन्त्रण इकाईसँग सुसज्जित छन्, जसले तपाइँलाई खाली र बेवास्तायोग्य व्यञ्जनहरू पहिचान गर्न अनुमति दिन्छ। खाना पकाउने प्यानलहरूको मुख्य फाइदाहरू: सुरक्षा, सफाईको आराम, छिटो, दक्षता, अर्थव्यवस्था। प्यानलको सतह कहिल्यै जलाउन हुँदैन।
त्यसोभए, हामीले पत्ता लगायौं कि यस प्रकार को हीटिंग (प्रेरण) प्रयोग गरिन्छ।
लैंप को छनौट: एक 100 डब्ल्यू गरमीपदी दीपक मा कितने लुमेन लें?
अमेरिका समय क्षेत्र: अलास्का देखि जमैका सम्म
सामाजिक मनोवृत्ति: विश्वासहरू जसले कार्यमा परिणत गर्दछ
Descartes Rene: एक संक्षिप्त जीवनी र विज्ञान मा एक योगदान। कार्यवाही र गणितज्ञ डार्टर्ट्स को शिक्षाहरु
Butusov Vyacheslav Gennadevich: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन, काम
किन आफ्नो चिया व्यापार सुरु?
छोराछोरीको लागि कलम संग Winders - एक महान उत्प्रेरणा पहिलो स्वतन्त्र चरण बनाउन
Evdokimov, "Stepan, मेरो छोरा": सारांश, विश्लेषण